Shirkadda Isgaadshiinta Jabuuti oo Berbera keenaysa Internet-ka Baddda hoos mara. |
Shirkadda Isgaadshiinta Jabuuti oo Berbera keenaysa Internet-ka Baddda hoos mara.
Hargeisa (GNN)-Shirkadda Isgaadhsiinta dalka Jabuuti ayaa shirkaddaha Isgaadhsiinta Somalida Hargeysa uga furtay shir ay ku qorshaynayso Internet-ka Badda hoos mara oo ay doonayso inay ka keento Jabuuti isla markaana soo dhigto Berbera.
Mashruucan oo la tartamaya Internet-ka kale ee ay dhawaan sahamiyeen shirkadda Telesom iyo shirkadaha kale ee Golis (puntland) iyo Itoobiya ayaa noqonaya mid furaya Loolan adag oo dhinaca adeeha Internet-ka ah, waxaana muuqda laba qorshe oo is-barbar socda oo ay Xukuumadda Somaliland mid walba gaarkiisa u ogtahay.
Shirka shirkadda Isgaadhsiinta Jabuuti Hargeysa ka furtay oo galay maalintiisii labaad ayaa waxa ku bahoobay shirkadaha Isgaadhsiinta Somalida oo dhan oo ay ka mid yihiin shirkaddaha Telesom iyo Golis oo iyana mid gaar ah dhawaan sahamiyey isla markaana ay xukuumaddu ogolaansho u muujisay, halka shirkadda SOMCABLE oo hore ay Golaha Wakiiladda iyo Xukuumadda Somaliland-ba Kooto ugu xidheen kalideed inay Internet-kaas keentaa qayb ka tahay Hindisahan cusub ee Jabuuti.
Shirkadda SOMTEL oo ka mid ah shirkaddaha ugu waaweyn Somalida dhinaca Isgaadhsiinta dhawaana Daah-furtay adeegyo cusub oo dhinaca Internet-ka ah ayaa iyana qayb ka ah shirkaddaha u fadhiya shirka shirkadda Isgaadhsiinta Jabuuti ka wado Hargeysa, kaasoo la doonayo in laga soo saaro fulinta Internet labaad oo Berbera la soo dhigo.
Ma kala cadda SOMCABLE inay aqbashay in Kootadii in laga qaadaa sharciyowday, hase yeeshee ka mid ahaanshaha qorshaha cusub ee Jabuuti ee isbahaysiga mashruuca Badda hoos mara ee loo yaqaan DARE oo hada Hargeysa loo fadhiyo dhawr jeer oo hore-na Hargeysa iyo jabuuti-ba uga soo qabsoomay ayaa daaha ka rogaya in ay u xadhko xidhatay Tartan xalaal ah inay la gasho shirkadaha kale ee Internet-ka gaar u wata ee ay ka mid tahay Telesom.
Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa dhawaan xilkii ka qaaday Wasiirkii Boosaha iyo Taliyihii ciidanka ilaalada xeebaha oo uu ku Eedeeyey inay fulin waayeen ama fududeeyeen Markabkii Badda Somaliland ka fuliyey Sahankii ay Internet-ka ku keenaysay Telesom iyo shirkadda Isgaadhiisnta Itoobiya oo shuraako ku ah, halka la hadal hayo inaanay kaba war-qabin shirarka ay shirkadda Isgaadhsiinta Jabuuti ka wado Hargeysa.
Hore shirkan iyo shirar la mid ah waxa Hargeysa ugu qabtay masuulka ugu sareeya isgaadhsiinta Jabuuti, kaasoo imikana ku sugan isaga iyo sadex sarkaal oo kale shirkan oo ka dhacaya Hotel-ka Damal ee Hargeysa, waxaana jirta war la’aan sahlaysa in mar kasta Xukuumadda Somaliland baraarugto marka mashaariicdu fusho, sida kii Telesom oo kale sida ka muuqata talaabadii xilka qaadista ahayd ee dhacday markii Sahanka Internert-ka G2A qabsoomay.
Wallow la sheego in masuuliyiin Xukuumadda Somaliland ka mid ah shirkadaha la kala safan yihiin oo SMCABLE-na qaar ka mid ah masuuliyiintu u xidheen inay Internet-ka Badda kalideed keento, kuwayoow kale-na ay Telesom garabka saareen, hadana labada arrin-ba waa kuwo xukuumadda dhibteedu ku soo noqonayaan, inkasta oo ay dadweynaha dantoodu ku jirto Loolanka iyo Tartanka shirkaddaha dhexdooda.